राष्ट्रिय बहस, कपुरी 'क' र विचौलिया| The Margin Media
राष्ट्रिय बहस, कपुरी 'क' र विचौलिया
माघ २१, २०७८ शनिबार
...जानुभयो ? ठिक छ ।
पहिलो - यो लेख मैले लेखिरहेको हुँ र यहाँ म आफूखुसी गर्न पाउँछु । किन पाउँछु भन्दा पाइने रहेछ । किनभने तपाईँ मलाई ‘किन आफ्नै व्याख्या गर्दैछस् ?’ भनेर सोध्ने गर्नु हुँदैन । किन सोध्नु हुँदैन भन्दा तपाईँलाई मेरो चित्त दुखाई हाल्न मन छैन । किन मन छैन भन्दा म मिडियामा छु । मिडिया (पहुँच)मा हुनेलाई तपाई सित्ति जिस्काउनु हुँदैन रहेछ, चित्त दुखाउनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँका व्यहोराहरूले देखाइरहेका छन् । तपाईँले मेरो चित्त नदुखाएको पनि निकै महिना भइसकेँ । तपाईँ लेख्ने मान्छे हो, बुझ्ने मान्छे हो । हो नि ? मलाई दुख्न मन छ यार, कुरा बुझ्नुस् न । (म आफैँ पनि दोहोरो भूमिकामा छु, लेख्छु पनि, छाप्छु पनि ।)
दोस्रो - म तपाईँका पीरमर्का पनि बुझ्दछु । तपाईँका बाध्यता, रहर, सपनाहरू पनि बुझ्दछु । आफूलाई बिकाइहिँड्नु पर्ने बाध्यता तपाईँसँग किन छ भन्दा तपाईँलाई आफ्ना कुरा राख्न मन छ । सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, टिभी अन्तर्वार्ता र पत्रिकाका परिशिष्टांकका अङ्कहरूमा देखिरहनुपर्ने जरुरत पछिल्लो सामयिककीको देन हो । एकजना भन्दै थियो, ‘यो चर्चा-परिचर्चाको युग रहेछ ।’ एकजना वास्तवमै साँचो बोल्दैछ।
तेस्रो - ‘काठमाडौँ (राजधानी, सदरमुकाम) लाई कुनाकाप्चा चहार्ने न बाध्यता छ, न रहर नै । आउनुपर्ने कुनाकाप्चाहरू आफैँ काठमाडौँकहाँ आउँछन् । नआए भुत्रैसिति । काठमाडौँ देशका कुनाकन्दरा चहार्दै न हिजो हिँड्यो, न आज हिँड्दै छ । भोलि चाहिँ हिँड्दिओस् भन्ने आशले यो गलफती गरिरहेको हुँ ।
चौथो - झिँझक लागेको हो भने कोसेली, झन् नयाँ, द मार्जिन, शिलापत्र, बाह्रखरी, साहित्यपोस्ट या चेतलुङ आदिआदि पढ्नुहोस् । तमोसोमा ज्योतिर्गमय, चिया खानु भयो, कफी विथ सुमन, ‘गीत, गजल र शीतल’का युट्युब भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ । बौद्धिक विलासका खातिर बागबजार, बानेश्वर (शंखमुल हब), भृकुटीमण्डपका चिया पसल या कफी विथ बुक्स हाउसहरूतर्फ पनि जानु सक्नुहुनेछ । त्यता एकैखाले ‘वैचारिक धाराप्रवाह’हरू प्रसारित भइरहेका छन् - मेरी बास्सै, तितो सत्य जस्तै । २००० औँ, २२०० भाग । एकै पात्र, एकै वैचारिककी । एकै अनुहार, एकै बहस ।
पाँचौँ - सिलसिला तोड्ने या रोचक बनाउने सवालमा आफ्नो लेखमा एकाएक ‘सुनाऊ ?’ भनेर प्रश्न सोध्ने परिपाटीमा आज नगरकोटीहरूको बाहुल्यता छ । एक जमानाभर (२०७३-२०७६) सम्म मैले ‘छोटे नगरकोटी’को तक्मा भिरेर हिँडेको हुँ । तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहै छ ।
क भन्छ, ‘ऊ बेला यज्ञश आएका थिएँ । भेटघाट राम्रै भयो । एउटा रचना दिएको थिएँ । छाप्दिएँ ।.. त्यसयता मलाई नो इन्ट्री छ राजु भाइ । जाँगर पनि चल्दैन पठाउने । कोही माग्न आएका पनि छैनन् । ऊ बेला खोजिखोजी परिशिष्टांकहरू पढिन्थ्यो, कलेक्सन गरिन्थ्यो । पुराना छन् मसँग तर, आजभोलि मन लाग्दैन - पढ्न । शनिबार आउँदैछ भनेर कुर्ने दिन गए क्यार भाइ ।.. कोसेली भन्दा त फेसबुकै ठिक छ है राजु भाइ । के भन्नुहुन्छ ?’
दोषको अर्को भागिदार हुन् - सम्पादक । सङ्कलकले फरक विचार र अनुहारलाई समेट्न नसक्दा पनि चुपचाप छापिराख्ने सम्पादकहरू सम्पादकीय लेख्नकै लागि मात्र छन् कि जस्तो लाग्छ ।
लेनिनको शव परिक्षा
'ग्र्याभिटेशनको थ्योरी'को न्यारेसन- 'मेरा बाजेले घ्यु खाएका थिए, मेरो हात सुँघ् सुँघ्'
‘आमकिसान र खाना संस्कृति’को सीमान्तीकरणको प्रतीक दुई मुखे चील
'म भात खाएर खाटमा सुत्थेँ, ऊ मसी र रङ खाएर क्यानभासमा सुत्थ्याे'
पुरानो म [एकालाप]
मेरो टाउको दुखिरहेको छ !